Mgbatị ntutu ntutu mmadụ nke Peruvian kwụ ọtọ - ntutu Atlanta ruo mgbe ebighi ebi Mgbatị ntutu ntutu mmadụ nke Peruvian kwụ ọtọ - ntutu Atlanta ruo mgbe ebighi ebi
Mgbatị ntutu ntutu mmadụ nke Peruvian kwụ ọtọ - ntutu Atlanta ruo mgbe ebighi ebi - Mgbatị ntutu ntutu na-amaghị nwoke ruo mgbe ebighi-ebi
size 12 sentimita asatọ 14 sentimita asatọ 16 sentimita asatọ 18 sentimita asatọ 20 sentimita asatọ 22 sentimita asatọ 24 sentimita asatọ 26 sentimita asatọ 28 sentimita asatọ 30 sentimita asatọ 32 sentimita asatọ 34 sentimita asatọ 36 sentimita asatọ 38 sentimita asatọ 40 sentimita asatọ
12 sentimita asatọ 14 sentimita asatọ 16 sentimita asatọ 18 sentimita asatọ 20 sentimita asatọ 22 sentimita asatọ 24 sentimita asatọ 26 sentimita asatọ 28 sentimita asatọ 30 sentimita asatọ 32 sentimita asatọ 34 sentimita asatọ 36 sentimita asatọ 38 sentimita asatọ 40 sentimita asatọ
Akpụkpọ anụ, adịghị agbanwe agbanwe na ntutu VIRGIN. Mgbatị ntutu ogologo ntutu anyị nke Peruvian bụ ndọtị ndị na-adịgide adịgide nke ejiri ntutu ntutu mmadụ kachasị mma mee. Mgbakwunye ndị a na-ejide curls na agba nke ọma, na-adịgide ihe dị ka afọ 2 na nlekọta kwesịrị ekwesị.
Anyị Mgbakwunye ntutu ntutu mmadụ na-amaghị nwoke nke Peruvian A na-anata ya site na India ozugbo wee nweta obi ụtọ maka ntutu ha yiri ntutu Peruvian. Usoro ọ bụla dị mma karịa ụdị ntutu ọ bụla ọzọ nke na-agbakwunye ọkpụrụkpụ na ụdị ọ bụla mana ọ ka na-agwakọta nke ọma na ụdị ntutu niile. A na-egbute ngwa ahịa anyị niile na ebumpụta ụwa ha na nke ọ bụla na - esite n'aka ndị na - enye 1-2 iji hụ na agbanwe agbanwe.
Ndi oru aka abuo weputara igbochi nchapu ntutu
Jide curls nke ọma
Ọ dị n'ogologo ruo sentimita 40
3.5 ounces kwa otu
Mgbatị ntutu Braziil nwanyị kwụ ọtọ
Ịgachi price $ 90.00
Mgbatị ntutu ntutu nke Brand Blond n'ụzọ ziri ezi
Mgbatị ahụ dị na Brazil na-efegharị
Laghachi na Mgbatị Akpụkpọ Isi Atụrụ Na-egosi